ကမ္ဘောဒီးယား (8) မြန်မာ (8) ဗီယက်နမ် (4) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (3) ထိုင််း (3) တရုတ် (1)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (17) ခမာဘာသာစကား (6) ဗမာဘာသာစကား (2) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (2) လာအို (1)
SHP (10) CSV (9) WMS (8) DB_TABLE (6) GeoJSON (4) KML (4) JPEG (1) ODT (1) XLSX (1) ZIP (1)
Open Development Ca... (7) Open Development My... (7) Open Development Vi... (3) Open Development Laos (2) Open Development Th... (2) Open Development Me... (1)
အုပ်ချုပ်ရေး (22) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (6) အစိုးရ (4) သတင်းအချက်အလက်များ ... (3) ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာ... (2) ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျ... (2) နိုင်ငံတော်အစိုးရ (2) အစိုးရစနစ် (2) စိုက်ပျိုးရေး (1) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (1) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (1) ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ (1) လူနေမှုဘဝနှင့် သက်ဆ... (1) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (1) ရွေးကောက်ပွဲများ (1) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင... (1) စွမ်းအင် (1) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (1) အတည်ပြုခန့်အပ်ထားသေ... (1) ကျား၊မ သဘော (1) အလုပ်သမား (1) မြေယာ (1) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု (1) လူဦးရေ (1) မူလတန်းနှင့် အလယ်တန... (1) လူထုနှင့် အုပ်ချုပ်... (1) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (1) လမ်း၊ တံတားများ (1) ကုန်သွယ်ရေး (1) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိ... (1) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (1)
Creative Commons At... (8) Creative Commons At... (5) License not specified (4) CC-BY-SA-4.0 (3) CC-BY-4.0 (1) unspecified (1)
ခေါင်းစဥ်များ: Administration None: dataset
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 13 နိုဝင်ဘာ ရင်းမြစ်: ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း နှင့် အာဏာမျှဝေသုံးစွဲခြင်း, ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာရင်း, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ, အုပ်ချုပ်ရေး
မြန်မာ 2019၊ 29 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: အုပ်ချုပ်ရေး
Layers များအတွက် WMS အရင်းအမြစ်များ- မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးနယ်နမိတ်များ
ထိုင််း 2020၊ 17 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: Royal Thai Survey Department အုပ်ချုပ်ရေး
ထိုင််း 2020၊ 21 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: Royal Thai Survey Department အုပ်ချုပ်ရေး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများစာရင်း
မြန်မာ 2020၊5ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Multilingual Field: No Data for the current selected language has... နိုင်ငံတော်အစိုးရ, အစိုးရ, အစိုးရစနစ်, အုပ်ချုပ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 22 ဧပြီ ရင်းမြစ်: Website of DMK M&E Internal System:... အစိုးရ, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ, အုပ်ချုပ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 1 ဧပြီ ရင်းမြစ်: Official facebook page of Municipal / District Administration of... ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ, လူထုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းအတွက် ဥပဒေရေးရာ ၀န်ဆောင်မှုများ, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ, အုပ်ချုပ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 30 မတ် ရင်းမြစ်: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs stores the... အုပ်ချုပ်ရေး
These datasets contain three different types of administrative boundary levels: provincial, district and commune which were contributed by Office for the Coordination of...
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 19 မတ် ရင်းမြစ်: http://www.edc.com.kh/images/list_of_edc_cost_2015-12-16_0001.pdf လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦ, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ, အုပ်ချုပ်ရေး
၂၀၁၅ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းခံရသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
မြန်မာ 2020၊6ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: 1. Union Election Commission 2. Open Myanmar Initiative ရွေးကောက်ပွဲများ, အုပ်ချုပ်ရေး
၂၀၁၅ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းခံရသူများ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စု နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဝန်ကြီးများစာရင်း
မြန်မာ 2020၊6ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: 1. Myanmar President Office... နိုင်ငံတော်အစိုးရ, အစိုးရ, အစိုးရစနစ်, အုပ်ချုပ်ရေး
မြန်မာ 2019၊ 22 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: https://mmr.postcodebase.com/ အုပ်ချုပ်ရေး
မြန်မာနိုင်ငံနယ်မြေဒေသများ ၊ အစိုးရနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏စာပို့သင်္ကေတများအား ဤအချက်အလက်အစုတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယား 2016၊ 23 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: http://www.ncdd.gov.kh/jdownloads/Prakas/prokas_mef__mof.pdf သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ, အုပ်ချုပ်ရေး
This dataset containsalist of public services provided by Ministry of Public Works and Transport, focusing on motorcycle and automobile. There are three main categories of...
ဗီယက်နမ် 2016၊ 30 ဇွန် ရင်းမြစ်: Global Map of Vietnam ©ISCGM/ Department of Survey and Mapping,... အုပ်ချုပ်ရေး